HALKAAN KA AKHRISO WARGEYSKA M.TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACP 24-KA NOV. 2021-KA
Wednesday November 24, 2021 - 09:10:39 in Wararka by Mogadishu Times
Farmaajo Oo Dalalka COMESA U Bandhig ay Fursado Ku Aaddan Maalgashiga Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb-galay Shir Madaxeedka Suuqa-wa daagga Bariga iyo Koonfurta Afrika (COME SA) ayaa soo bandhigay fursadaha ballaaran ee ku aaddan maalgashiga Soomaaliya.
Madaxweynaha a yaa tilmaamay in iskaashiga dhaqa alaha iyo fudu de yn ta ganacsiga dalalka Gobolka ay aas-aas u tahay qorsheya asha heer Qaaradeed ee kobcinta nolasha dadkeenna danyarta ah, cirib-tirka saboolnim ada iyo xaqiijinta hiigsiga horumarka loo dhan yahay.
"Soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhidibba da u taagay dalladan ganacsi ee dalalka Bar iga iyo Koonfurta Qaaradda waxaa ka go’an in ay ka faa’iideysato hal-abuurka ganacsi ee ay ku tilmaaman yihiin dadkeenna Soomaaliyeed oo ay weheliso booska istiraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeennu”.
Madaxweyne Farmaajo ayaa boggaadiyay dadaallada Madaxda Dalalka ku bahoobay CO MESA ay ku bixinayaan ka miro dhalinta qorsh aha is-dhexgalka dhaqaalaha, si xal waara loo gu helo aafooyinka dib u dhigay nolasha shuc uubta dalalkaas, loogana soo kabto saameyn ta xooggan ee Cudurka COVID-19 uu ku yee shay dhaqaalaha dalalka Gobolka.
"Wadamada xubnaha ka ah COMESA waa kala duwan yihiin, waxayna qani ku yihiin khey raadka dabiiciga ah iyo kan aadanaha labada ba. Waxaa jira fursado dhab ah oo tan looga faa’iidaysan karo iyada oo loo marayo in la xo ojiyo ganacsiga gudaha ee COMESA”
Madaxweynaha JFS oo kulankan kagala qe yb-galay hab fogaan arag ah Madaxda dalalka ku mideysan dallada dhaqalaha ee COMESA, Q/Midoobey, Midowga Afrika, Hay’adaha Maal iyadda ee heer Qaaradeed iyo Bangiga Addu unka ayaa ugu hambalyeeyey Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Masar Md. Cab dulfataax Al-siisi oo loo doortay Guddoomiya ha cusub ee dalladda dalalka ku mideysan COMESA.
R/Waaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Ro oble ayaa ku dhawaaqay in dalku galay xaalad bani’aadmi nimo oo deg deg ah oo ka dha latay abaaraha dalka ku sii baa haya, ka dib marki uu guddo omiyay shir aan caadi ah ayn oo Golaha Wasiirradu ka yee sheen xaaladda abaaraha.
"Shalay oo ay Taariikhdu Aheyd 23 Novem ber 2021 kadib markaan dhageestay warbixin tii ay soo diyaariyeen gudigii aan u magacaab ay xaaladda abaaraha dalka taas oo muuji say inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo ay keenen abaaruhu sidaas darted, waxa an Ku dhawaaqayaa in uu dalku galay xaalad Deg deg ah oo bini’aadanmino loona baaha nyahay gurmad deg deg ah gudaha iyo dibadaba” ay uu yiri RWasaare Roobl R/Wasaaraha ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dunida ugu baaqay in deg deg loogu soo gur mado Shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen.
Garyaqaanka guud ee Soomaaliya: Raysal wasaaruhu wax shaqo ah kuma lahan dac wada kiiska Ikraan
Garyaqaanka guud ee DFS Cismaan Cilmi Guuleed "Biikilo" ayaa R/wasaaraha ka fogeey ay inuu wax shaqo ah ku leeyahay qaadida dacwada kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Garyaqaanka ayaa u muuqday mid ka jawa abayay kadib markii rag siyaasiyiin ah oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ku eedeeyeen R/Wasaare Rooble in uu kasoo bixi waayay ballanqaadkiisii ahaa in ay caddaa lad heli doonaan qoyska Ikraan.
Waxay shaki galiyeen kalsoonida lagu qabo in R/wasaaruhu daacad ka yahay kiiska Ikra an,ka dib markii maalmo ka hor guddiga baaris ta kiiskan ay soo saareen warbixin ku saabsa nayd in masuuliyiintii hay'adda NISA ee lague edeeyay kiiskan,aysan wax lug ah ku lahayn.
"Raysal wasaaruhu wu xuu ka shaq eynayay in maxkamaddaha loo ma dax bannaaneeyo kiis ka Ikraan. Maxkamad a ha ayaa la sugayaa go’ aanka ugu dambeeya, had dii lagu qanci waay ana process loo mara yo ayaa jira, R/wasaar uhuna wax shaqo haba yaraatee kuma la han” ayuu yiri Mr.biikolo
Cismaan Biikolo wuxuu sheegay hay’ada ha caddaalada iyo xeer ilaalinta in laga sugayo inay kiiska Ikraan Tahliil mariyaan caddaala da, wuxuuna sheegay in galka kiiskaas uu weli furan yahay, isla markaana ay dowladdu raad inayso macluumaad ku saabsan kiiska
Cumar Cabdirashiid Oo Ka Digay Dib U Dha ca Hareeyay Doorashada Dalka
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Md. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka digay dib u dhacyada hareeyay doorashooy in ka dalka, iyadoo ilaa iyo haatan aysan cadeyn xiliga ay soo dham aaneyso doorasha da xildhi baanada
golaha shacabka oo mam aulada intooda badan aysan waxba ka qaban.Mr.Sharmaake ayaa tilm aa may xagal-daacinta lagu hayo doorashada inay mustaqbalka sa amayn ku yeelankarto dowladnimada dalka, is agoo dhinacyada ay quseyso arrintan ugu ba aq ay iney ka shaqeeyaan sidii doora sho cad aal ad iyo deg deg leh dalka uga dhici leheyd.
"Haddii aad hesho cunto wasakhaysan, ma jirto wax faa’iido ah oo aad ka baarto, kel iya waad tuuraysaa. Habka doorasho ee cudur ka qaba ee gacanta lagu hayo ayaa laga yaa baa inuu sumeeyo nidaamka dowladnimo ee mustaqbalka.” Ayuu yiri Cumar Cabdirashiid.
Marxaladaha ku gadaaman doorashada sa nadkan ayaa ka dhigaysa inay Somaliya waj aheyso doorashadii ugu adkeyd, tan iyo dib u yegleelidda dowladnimadeeda, muddo kow iyo labaatan sano laga jooggo.Cumar Cabdirash iid Cali Sharmaarke R/ wasaarihii hore ee So omaaliya, ayaa tilmaam ay in hannaan hufan oo doorasho lagu gaari karo in xilka si nabd oon loogu kala wareego.
"Bedelka hab maamuuska khaldan ee door ashada waxay noqon kartaa dariiqa keliya ee loo mari karo in si habsami leh oo nabdoon xil ka loogu kala wareego.” Ayuu bartiisa Twitt er-ka ku sheegay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo La Gu ddoonsiiyay Shahaadada Musharaxnimada
Guddoomiyaha G/Shacabka BJFS Md. Maxa med Mursal She/C/raxmaan ayaa Shalay la guddoonsiiyay sha haadada mus har axnimo ee Xildhib aanada Golaha Shacabka.
Guddiga doora shada K/Galb eed ayaa guddo omiya ha guddoonsiiyay shahaadada ka dib markii uu buuxiyay dhamaan shuruudihii mu sharaxnimo ee looga baahna a.G/ye Mursal ayaa mar kale u tartamaya kursiga sumadiis u tahay HOP 182 tahay ee G/ Shacabka.
Soomaaliya Iyo Shiinaha Oo Ka Wada Had lay Xoojinta Xiriirka Iyo Iskaashiga Ka Dhexeeya Labada Dal
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Is kaashiga Caalamiga, Balal Maxamed Cusma an, ayaa ku qaabilay Muqdisho, Safiirka Jam huuriyadda Shacbiga Shiinaha ee JF Soomaa liya, Fei Shengch ao,waxa uu kala hadlay xo ojinta xir iirka & iska ashiga ka dhexee ya 2da dal & siyaabaha lagu xoojin karo, laguna hour marin karo.
Intii lagu guda jiray kulanka , waxaa looga hadlay sare u qaadida iskaashiga laba geeso odka ah ee Soomaaliya & Shiinaha & dardar gelinta dhinac weliba si loo gaaro danaha gu ud & himilooyinka 2-da dal & 2-da dad ee sax iibada ah, waxaa sidoo kale ay fallanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka iyo du nida ee taabanayay danaha guud ee 2-da dal.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa soo saaray ammar ku socda Musharixiinta doonaya inay u tartamaan kura asta G/shacabka & Ergada doora naysa Xildhib aanada.
Ammarka ay soo saareen G/H/ D/H/F. ayaa waxaa ku aadd an Afgashiga loo yaqaanno facesm ask ga, oo dahwanahaan la arka yay qaar ka mid ah Ergooyinka oo coday naya iyagoo ag ku u xiran yahay, balse Gud diga ay aa shaaci yay in arrintaasi aan marn aba la aqabali doonin.
"G/H/D/H/F waxay ku war galinayaan musha rixi inta ku tartamaya kuraasta Golaha Shacab ka ee dalka oo dhan in aan la aqbali doonin in Musharax ku jira tartanka uu qariyo wajigiisa, si loo ilaaliyo daahfurnaanta doorash ada dal ka, Mahadsanidiin” ayaa lagu yiri Qoraal ka soo ba xaya G/H/D/H/F.
Dhawaan Ergada ka socotay Somaliland ay aa codeeyay iyagoo wajigu u xiran yahay, taa si oo keentay hadal hayn iyo dhaleecayn xoo ggan oo loo jeediyay guddiga doorashooyinka, taasi oo keenatay in haatan ay amar culus soo
Xog: Mucaaradka oo ku hanjabay inay qaadici doonaan doorashada
Madaxda M/Musharixiinta mucaaradka ayaa la kulmay xubno kamid ah guddiga doorasha da heer Federaalka, waxayna la wadaageen walaacooda ku saabsan sida ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada G/Shacabka.
Mucaaradka waxaa laga xirtay dhammaan albaabadii ay kasoo geli lahaayeen doorasha da G/Shacabka, waxaana aad u yar xubnaha fursadda u heysta inay Xildhibaano soo saar taan.
Waxay guddiga doorashada gaarsiiyeen wal aac iyo hanjabaad wada socda. Xubin sare oo kamid ah guddiga doorashada heer Federaal ayaa noo xaqiijiyey inay mucaaradku ku hanjabe en inay qaadici doonaan geediga doorashada, ha ddii aysan waxba iska ba dalin habka ay wax ku bilowdeen.
Dooda mucaaradka waxay u muuqataa mid maangal ah, laakiin cidda arrintaan wax ka qa ban karta ma ahan guddiga doorashada ee he er Federaal oo aysan waxba gacanta ugu jirin hadda.
Doorashadaan socoto awoodda ugu badan waxaa ku leh madaxda maamulada, laakiin mucaaadka illaa hadda waxay ka dhuumana yaan inay madaxda maamulada toos u wajah aan, runta u sheegaan, dhaliilaan, u hanjaba an oo ay doodooda bannaanka la yimaadaan, kuna toosiyaan cidda canaanta leh.
Xubinta warbixinta nala wadaagay wuxuu layaab ku tilmaamay inay mucaaradka tahay cidda ugu horeysa ee u hambalyeysa xildhib aanada soo baxa, haddana waana isla cidda u gu horeysa ee ka cabata xubnahaas, taas oo aan is qaban karin, marka hoos loo eego xaa ladda.
Haddii ay mucaaradka qaadacaan guud ah aan doorashada waji cusub ayuu geli karaa dalka. Dadka qaar waxay guuxa iyo hanjabaa da ka imaaneysa dhanka mucaaradka ku fasir een niyad-jab ka heysata natiijada soo bixi kar ta doorashada, maadaama illaa hadda ay wax u socdaan sida uu Farmaajo rabo.
Mucaaradka malahan hal musharax, dhina ca kalena waxaa aad u yar saameyntooda gu ud ee doorashada, laakiin marka la eego sa ameynta ay Caasimadda ku leeyihiin waxay awoodaan inay abuuraan jawi tir-tiri kara shaq ada socota ee doorashada.
Xafiiska Rooble oo jawaab ka bixiyey weer arka uga yimid qaar ka mid ah mucaaradka
Xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo R/Wasaare Rooble ayaa markii u horeysay ka hadashay we erarka afka ah ee ku bilowday Ra ’iisul Wasaaraha, kaas oo u ga imaanaya xub no ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ah Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu ay aa sheegay in Musharaxiinta qa ar" oo aan dooneyn in doora sho qabsoonto ooraba in sidan dalku sii ahaado ay xagxaga sho ku hayaan R/Wasaaraha oo dadaal ugu ji ra sidii doora shooyinka loo dhameytiri lahaa.”
"Doorashada waa masuuliyad wadareed ay hormuud u yihiin Golaha Wadatashiga Qaran oo ka kooban DFS & D/Goboleedyada, balse siyaasiyiinta qaar ee bartilmaameed ka dhiga naya R/Wasaaraha waa baroorta Orgiga ka weyn, waxaana laga leeyahay dano gaar ah oo lagu carqaladeynayo doorshada oo u eg far iimo shisheeye. Tabasho iyo tiigsi waa kala la bo .Talo keen lahow ama talo raac lahow,” ay uu Macalimuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga.
Dhanka kale Wasiir ku-xigeenka warfaafin ta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa qor aal uu ku baahiyey bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ujeedka weerarkaas uu yahay "jah-wareerin lagu sameynayo bulshada Soom aaliyeed.”
Waxa uu si weyn uga difaacay eedeymaha doorashada ee loo jeediyay R/Wasaaraha oo asagu ah Mas’uulka u sareeya ee majaraha u haya hanaanka doorashooyinka iyo amnigeda.
"Waxaan arkay shaqsiyaad baraha bulsha da ku weeraraya Raysalwasaare Maxed Xus een Rooble Kuwaas oo isku dayaya in duruufo iyaga ugaar ah ay ku jahawareeriyaan bulsha da Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waa ka dharagsan yihiin doorka uu Raysalwa saaruhu ka qaatay badbaadinta Dalka iyo Dad ka Soomaaliyeed iyo sida uu ugu dhabar aday gay xaaladihii murugsanaa ee sanadkii ugu da nbeeyay dalku wajahay,” ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in siyaasiy iinta qaarkood isku dayaan in R/Wasaare Ro oble u isticmaalan hub ay ku weeraraan dad kale, haddii ay taasi awoodi waayana isku day aan inay suurad xumeeyaan, sida uu hadalka u dhigay.”
R/w/re Rooble wuu yaqaannaa shaqada u taala wuuna gudanayaa, Shacabka Soomaa liyeedna weey miisaamikaraan erayada marin habaabinta iyo gefka ah ee laga leeyahay da naha dahsoon.” "Dalku doorasho ayuu ku ji raa qofkastana calafkiisa ayuu qaadayaa, bal se cidna kuma haboona in ay maslaxadeeda gaarka ah ku cabirto danaha guud ee Qaran ka,” ayuu ugu dambeyntiina ku yiri qoraalkiisa.
Hadalka Al-Cadaala ayaa imanaya kadib mar kii uu Siyaasiga caanka ah ee C/Cabdishakuur Warsame, sidoo kalena ka mid ah musharixiin ta u taagan xilka madaxweynaha uu si lama fil aana weerar dhanka afka ah ugu qaaday R/l Wre Rooble.
C/C/shakuur ayaa marka hore su’aallo bad an ka keenay xaaladaha soo kordhay, gaar ah aan sida uu ku soo dhammaaday kiiska Ikraan Tahiil oo uu R/wasaaruhu horay u ballan qaad ay inay heli doonto cadaalad, dib u dhaca ku yi mid doorashooyinka 2021, iyo dhalinyaradii loo qaaday wadanka Eritrea.
C/C/Shakuur ayaa sidoo kale waxa uu she egay in arrimahan oo idil ay ku soo aadayaan, ka dib safarkii Rooble uu ku tegay Qatar oo uu ku tilmaamay inuu shaki weyn ka dhashay.
Madaxweyne Cali Guudlaawe oo la kulmay Wakiilo ka socda Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa Shalay M/Muqdisho ku qaabilay ku xigeenka Ergayga Gaarka ee Xoghaya Guud ee Q/Mid oobe u qa abilsan Soomaaliya Anita Kiki Gb eho,Safiirka M/Yu rub Tiina Intelmann iyo Sa fiirka Dowadda Ingir iiska ee Soomaaliya dan jire kate Foster. Shir kaan ayaa looga ha dlay arrimaha doorashooy inka dalka gaar aha an dardargalinta doorash ada golaha Shacab ka, Amniga iyo maashaari Icda.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhow aan deegaanada Hirsh abeelle ay ka bilaaban doonto doorashooyinka golaha shacabka oo si da ahfuran u qabsoomi doonto waxa uuna she egay in muwaadiniinta musharixiinta ah fursad siman la siin doono.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixi yay dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ee ku gadaaman deegaanada Hirshabeelle oo muhiim ay tahay in nagala caawiyo ka hortaga fatahaadaha.
Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo ku dhawaaqay doorashada laba kursi
Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa Shalay shaaciyay in Maalinta Berri lagu qab an doono M/ Dhuusamare eb ee Caasimadda Galmudug doorash ada 2 kamid ah kura asta Golaha Shacab ka.
Afhayeenka Guddi ga Doorashooyi nka Heer Federaal Axmed Safiina ayaa sheegay in 2da kursi ee ugu hor reeysa 5 Xildhibaan ee lagu dooranayo Dhuus amareeb beri la dooranayo, kuwaas oo kala ah HOP26 oo ay ku fadhido Ikraan Aadan Absuge & HOP104 oo uu ku fa dhiyo Guddoo miye kuxigeenka 2aad ee G/Sh.Mahad Cabd alla Cawad.
Sidoo kale Afhayeenka waxaa uu ugu baaq ay Ergada wax dooraneysa inay hoolka do orashada soo xaadir aan 8:00 Subaxnimo halka 9: 00 Subaxn imo la doonayo inay yi maadaan musharrixiinta labada kursi ku tar atamaya.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed S/ Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa Shalay magaalada Ista nbul ee dalka Turkiga kaga qayb galay mee rtada 89-aad ee shirka golaha guud ee Booliis ka Caalamiga ah ee INTERPOL.
General Xijaar ayaa dhawaan dalka France kula kulmay hoggaan ka ugu sarreeya Boliiska caalamiga ah ee Inte rpol oo ay ka wada ha dleen xoojinta iskaash iga labada dhinac
Shan kamid ah xildhibaanada gobolada Waqooyi ku meletalaya aqalka hoose baar lam aanka 11-aad, ayaa doorashadooda wax aa Shalay lagu doortay xarunta ciida nka bool iska ee Jneraal Kaahiye, iyadoo amniga caas imadda manta si aad ah loo ad keeyay.
Kursigii u horeeyay oo sumadiisu eheyd Ho pe225, waxaa ku soo ba xay wasiirkii ho re ee wa rfaafinta Soomaaliya Maxamed Xa yir Ma areeye, isagoo helay 96 cod, halka musharixii la tartamayayna uu helay uu helay saddex cod, iyadoo labada cod ee kal ana ay halaa been
Kursiga 2aad ee HOP202 ayaa waxaa qo rshuhu ahaa in ay ku tartamaan Aamino Cumar Jaamac iyo Aamino Cismaan Diiriye, hayeeshee Goobta doorashada ay kaga dha waaqd ay Aamin Cismaan Diiriye in ay tan aasushay, waxana cod gacan tag ah 101 Ergo oo goobta ku sugnaa ay ugu codeey een Aamino Cumar Jaamac.
Kursiga Saddexaad ee HOP210 ayaa waxaa qorshuhu ahaa in ay ku tartamaan Fa adumo Xasan Cali iyo Hoodo Cabdi Xaashi, balse kursiga ay ku guuleysatay Faadumo Xasan Cali kaddib markii ay u tanaasushay Hoodo Cabdi Xaashi.
Kursiga 4aad ee Hop#208 ayaa waxaa ku tartamay Maxamed Haaruun Cabdullaahi iyo Axmed Cali Maxamuud, waxaana 99 Cod ku guuleystay Maxamed Haaruun Cabd ullaahi, halka musharrixii la tartamay ayuu san helin wax cod ah, waxaana afartii sano ee la soo dhaafay kursigaan ku fadhiyay Xil dhibaan Jam aal Xasan Ismaaciil.
Kursiga ugu dambeeya ee doorashada Shalay ee Shanaad ayaa waxaa ku tarta may Axmed Cismaaan Diiriye iyo Dayib Cab duqaadir Jaamac, waxaana ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hop#233 ee golaha shacabka Axmed Cismaaan Diiriye.
Doorashooyinka dhacay Shalay waxa ay ka dhigeysaa in ilaa iyo haatan ay dooran yihiin 7 xildhibaan, waxaana harsan 268, ma adaama xildhibaanada golaha shacabka ay ka kooban yihiin 275 mudane.
Madaxweyne Deni Oo Kulan La Qaatay Saraakiisha Ammaanka Puntland.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Habeen hore kulan dhiirrigelin ah Saraakiisha Cii damada Booliska Puntland kula qaatay dee ga anka dalxiiska ee Ceel-haare oo ka tirsan degmada Qardho.
Saraakiisha Ciidam ada Booliska Punt land oo uu hoggaaminayo Taliyaha Ciida mada Bo oliska Dowlad Goboleedka Puntland, ayaa is aga kala yimi Gobollada Puntland Waxaana ay Shalay ka qeybgal een munaasaddii tababar ka loogu soo xiray dufcadii 4-aad ee Ciidam ada Booliska ee la tababaray, kuwaasi oo laga keenay dhamm aan Gobollada Puntland.
Madaxweynaha ayaa ku boggaadiyay Saraakiisha shaqada wanaagsan ee ay hay aan, wu xuuna faray in lasii laba jibaaro dad aalkooda iyo ka shaqeynta Amniga oo uu ugu horeeyo la dagaalanka maandoo riyaha .
Munaasabadda waxaa ka qeybgalay Gol eyaasha Dowladda, Taliyaha Ciidamada Booliska, Saraakiisha Ciidamada Booliska Puntland oo gobollada isaga yimid iyo maa mulka G/ Karkaar iyo kan D/ Qardho.
Faahfaahin ku saabsan qarax Xalay ka dhacay Muqdisho
Qarax xoog leh oo jugtiisa laga maqlay qe ybo badan oo ka mid ah gobolka Banaadir ayaa Xalay ka dhacay agagaarka warsha dii ho re ee Caanaha iyo isbitaalka Xoogga ee M/ Muqdisho.
Qaraxa oo noociisa la gu sheegay miino la dhig ay waddada dhinaceeda ay aa lala beegs aday gaad iid uu la soc day sar kaal lagu magacaabo Maxamed Da ahir oo ka tirsan booliska Somaaliya.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo dhan ka amm aan ka ah sarkaalkii uu ahaa bartilmaame edka qar axaas ayaa ka badbaaday, wax aana ku dhaa wacmay 3 Askari oo ka mid ah ilaaladiisa.
Sidoo kale xogta aan ka helnay qaraxaas waxay tilm aameysaa in goobta uu ku dhi ntay wiil darawal ka ahaa Mooto Bajaaj goo bta mar eysay, xilliga uu qaraxu dha cay.
Waxaana ka dib la xiray oo ciidamo badan ay isku gadaameen aaggii kolo nyada lagula beegsaday Qaraxa oo ah isgoys Mashquul badan.
Weli hey’adaha ammaanka wax faahfaah in ah kama aysan bixin Qaraxaas, sidoo ka le weli ma jirto cid sheegatay mas’uuli yadiisa.
Galmudug oo baaq ka soo saartay Abaar aha daka k jira.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafina Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Shire Fal agle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo socdaal ku maraya degaano ka tirsan Gobolka Mu dug ayaa sheegay inay u kuur galayaan xaa ladaha dadka ay ab aartu saameeysay.
Waxaa uu shee gay inay jiraan dad mas ’uuliyiin ah oo kasoo ja waabay baaqii la xi riiray u gurmashada dadka Abaartu same eysay ee ka soo yeeray Madax weyne Ax med Cabdi Kaariye Qoor Qo or, isa ga oo u mahad cel iyay dadkaas.
Sidoo kale Wasiir falagle waxaa uu had alki isa uu intaasi ku daray in amni buuxa uu kajiro degaannada Gobolka Mudug, isaga oo ugu ba aqay inay xoojiyaan dadka ku no ol ee kasoo kala jeeda Maamulada Puntland iyo Galmud ug, kuwaas oo uu sheegay inay hal goob wax ku wada cunayaan.
Ugu dambeyn Wasiirka Warfaafinta Gal mudug waxaa uu sheegay inay abaarta jirta ay ka soo jawaabi doonaan dowladda Fede raalka & Maamulka Galmudug, wuxuuna ku baaqay in dadka ay abaartu saameeysay loo gurm ado.
Booliiska Qardho Oo Gacanta Ku Dhigay Haweenay Ninkeedii Maseyr Dartii U Dishay
Booliiska Magaalada Qardho ee G/Bari ay aa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Hawe enay Ma seyr dartiis ninkeeda u dis hay Dorraad,taasi oo saaca dihii la soo dhaafay lagu raad joogay.
Haweeneey lagu mag icaabo Farxiyo Ismail ay aa ninkeeda ku dishay magaalada Qardho ee maamulka Puntland, ka dib markii uu muran iyo khilaaf harreeyay qoyskooda.
Ciidamada Dowladda Oo Sheegay Inay Dib U Qabsadeen Xerada Daynuunay
Wararka aan ka helayno deegaanka Dayn unay ee duleedka M/Baydhabo ayaa sheega ya in xooggaga Al-Shabab ay aroor nimadii Shalay dagaal ku qabsadeensal dhigay halka ku leeyihiin ciidamada dow la dda Soomaaliya, gaar ahaan qeybta 60-aad ee Xoogga Dalka.
Taliska ciidamada Soomaaliya ee deegaan kaas ayaa sheegay inay dib u qabsadeen saldhigga oo haatan ay gacanta ku hayaan.
Jen.Maxamed Sh.Maxamed Ciirow, tali yaha qeybta 60-aad ee ciida mmada dhulka ee Xoog ga Dalka ee Soomaali ya ayaa BBC u sheeg ay in khasaare ay gaarsiiyeen Shabaab isla markaana ay bacsanayaan dagaalyahanada kooxda ee
weerarka ku Soo qaaday
Maraykanka oo sheegay in khatarta hubka bayoolojiga tahay mid sii kordhaysa.
Mareykanka ayaa u sheegay Xafiiska Q/ Mid oobay ee Arrimaha Hub ka dhigista isni intii in khatarta hubka bayoolojiga ee caalam iga ah ay tahay mid dhab ah, halis ah oo sii kordhe ysa ma adaama dowladaha qa ar ay leeyihiin barnaamijyo ca sri ah oo si wanaagsan loo aas aasay, halka ku wa aan dow liga ahayni ay helayaan karti.
Ku-xigeenka Xoghayaha Xakamaynta Hub ka ee Maraykanka Bonnie Denise Jen kins ay aa ka sheegay furitaanka shirka af arta maal mood ah ee ka socda Geneva in heshiiska hubka noolaha uu yahay mid ka mid ah heshii syada amniga caalamiga ah ee muhiimka ah ee ilaaliya khatarta hubka wax gumaada.
Jenkins ayaa sheegay in iyadoo ay jiraan dadaallo aan horay loo arag oo lagu xoojin ayo amniga caafimaadka caalamiga ah, had dana dunidu waxay u baahan tahay inay wax ka qabato caqabadaha ugu dambeyay
Booliska Uganda oo xiray Soomaali lagu qabtay waxyaabaha qarxa
Booliska magaalada Kampala ee dalka Ugands ayaa gacanta ku dhigay muwaadin Soomaaliyeed oo gaarigiisa laga helay walx aha qarxa xili uu doonayay inuu galo Hotel Speke Resort ee degaanka Munyonyo.
Sida uu sheegay afhayeen u hadlay booli ska Fred Enanga, qaraxa ayaa waxaa soo saaray ilaalada iridka hotelka ee Munyonyo, xilli ay baaritaanno dhanka ammaanka ah ku sameeyeen gaariga, xilli uu doonayay in uu gudaha u galo dhismaha.
"Qalabka waxa ay ciidamadu ogaadeen in ay baaritaan dheer ku sameeyeen gaa riga, Toyota Wish oo uu watay Abdul Karim Mayowu, oo ah 25 jir Soomaali ah, deganna Lungujja ee qaybta Lubaga,” ayuu yiri Ena nga.
Afhayeen u hadlay booliiska ayaa shee gay in su’aalo la weeydiiyay, muwaadin ka Soomaaliga ah uu sheegay in uu ahaa kirey ste oo uu shaqaaleysiiyay Muxammad Xas an, oo 28 jir ah, oo ah muwaadin kale oo Soomaali ah, si uu uga soo kaxeeyo hote elka hooyadiis iyo walaalihiis.
"Sidaas ayuu ku kaxeeyay aaladdan laga shakiyay. Waxa aanu hadda xirnay labad aas iyo sidoo kale dad kale oo aad isugu dhowaa qoyska oo ay ka mid yihiin Asiili Ya asiin oo 40 jir ah iyo Maxbal Masal oo 20 jir ah.
Qalabka lagu helay ayaa ah mid ka sha qeyn kara ama qarxin kara walxaha qarxa. Hadda waxaa waajib naga saaran yahay ina an gadaal u raacno waxa ugu muhiimsan ee looga shakisan yahay walxaha qarxa,” ayuu yiri Enanga.
Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo tod obaadkii hore ay magaalada Kampala ka dhaceen qaraxyo mataano ah oo ay ku dhinteen 7 qof halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen.
Ammaanka dalka Uganda ayaa la ad keeyay tan iyo markii ay kordheen weer arada ismiidaaminta ah, waxaana howlgallo ay sameeyeen Ciidamada Booliska lagu qab tay Guud ahaan 106 qof.
Mareykanka Oo Digniin Culus Kasoo Sa aray Dagaalka Ka Socda Itoobiya
Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qa abilsan Geeska Afrika ayaa ka digay in sii hurinta dagaalka ka socda Itoob iya uu khatar ku yahay horumar kasta oo laga gaaro wada xaajo odka xabad joojinta.
Ka dib booqashadiisii Itoobiya, ayaa Jeffrey Feltman, waxa uu sheegay in Ra’iisal wasaare Abiy Axmed iyo fallaagada TPP ay u muuqdaan kuwo aaminsan in guul militari lagu kala calaf qaado.
Mr Feltman ayaa ka digay in haddii falla agada Tigreegu ay u soo ruqaansadaan caa simadda, Addis Ababa, ay taasi noqon do onto musiibo iyo wax aan la aqbali Karin.
Iyadoo kooxda TPLF ay sheegtay in daga alyahanadeedu ay ku soo wajahan yihiin Ad dis Ababa, ayaa Fransiiska iyo Jarmalku waxay noqdeen dalalkii ugu dambeeyay ee kula taliya in muwaadiniintoodu ay sida ugu dhakhsaha badan uga baxaan Itoobiya.
Maraykanka iyo UK ayaa dhawaan soo saaray talooyin kuwaas la mid ah halka Qar amada Midoobayna ay bilowday daadguray nta shaqalaha caalamiga iyo qoysaskooda.
Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya Abiyi Axmed Cali, oo kulan la yeeshay guddida fulinta ee xisbiga talada haya ee Barwaaqo, ayaa ku dhawaaqay in uu tagi doono jiidda hore ee dagaalka, isla markaana uu hoggaamin do ono Ciidamada difaaca Itoobiya, laga bilaabo Shalay oo Talaada ah. Sidoo kale kulankaas xisbiga Barwaaqo ayaa lagu go' aamiyay in xubin kasta oo xisbiga kamid ah, uu tagi doono furimaha hore ee dagaalka, kaas oo ay dowladdu kula jirto kooxda TPLF oo gacan ka helaysa Jabhadda Xoraynta Oromiya ee OLA.
Dhinaca kale waxaa maalinimadii Dorraad furimaha hore ee dagaalka lageeyay Ciida mada Booliska Fadaraalka Itoobiya, kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqdaan hawl gallada ka dhanka ah kooxda TPLF.
Ra'iisal Wasaare Abiyi Axmed oo ah abb aanduulaha guud ee Ciidamada Difaaca Qar anka Itoobiya, ayaa hadallo kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri " Itoobiya waxa ay taariikh dheer u leedahay ilaalinta magaca xoriyadda iyo madax ban naanida waddanka".
Hadallada Abiyi Axmed ayaa u muuqda kuwo uu ku dhiiragalinayo ciidamada difaa ca ee dagaalka ku jira, iyo waliba in uu ku muujiyo inay ka go'an tahay inuu hogaamiyo ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira TP LF, isla markaana uu dhiso mooraalka ciid amada kala duwan ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka ka dhanka ah TPLF.
Geesta kale kooxda TPLF ayaa majaajilo ku tilShalayy hadallada kasoo yeeray xuku umadda Abiyi Axmed, waxayna sheegeen inay sii wadayaan waxay ugu yeereen hal ganka cunaqabataynta lagaga qaadayo Tig ray.
Dhinaca kale safaaradaha dalal dhawr ah oo Mareekanku ku jiro ayaa muwaadinii ntooda ku sugan Itoobiya, ugu baaqay inay dalka Itoobiya isaga baxaan intay goori goor tahay, waxayna sheegeen in hadhaw ay ku adkaanayso safaaraddu inay muwaadiniinta u fududayso sidii ay uga bixi lahaayeen dal ka Itoobiya.
Hadallada Abiyi Axmed ayaa imaanaya un xilli kooxda TPLF ay sheeganayso inay usoo dhawaatay caasimadda Itoobiya ee Ad dis Ababa, isla markaana ay sheegayaan in ay sii wadayaan duulaankooda ka dhanka ah, xukuumadda uu majaraha u hayo Abiyi Axme
laba Musharax oo isaga baxay doorasha da ka socota Muqdisho
2 ka mid ah musharraxiinta ku tartam ayay kursiga tirsigiisa yahay Hop233 oo ay u taagn aayeen ilaa shan musharax ayaa she egay in doorashada ay qaadaceen, iyaga oo isaga ba xay hoolka doorashada Dugsiga Tababarka Ja neraaln Kaahiye ee M/Muq disho. Musharixiin ta hoolka isaga baxay ay aa waxaa ay kala yi hiin Muna Cali Cabdu llaahi & Ibraahim Aadan Muuse, waxaana bananaka hoolka kula hadle en War baah inta, iyaga oo sheegay in Ra’iisul Wasaare kuxigeenka da l ka Mahdi Maxamed Guule ed (Khadar ) uu bo obay ergada dooranaysa Kursigooda .
Waxa ay ku eedeeyeen in kursigooda uu mahdi guuleed u qoray ergo aan ku beel ah eyn kuwaas oo laga soo xulay beelaha kala duwan ee ku nool magaalada muqdisho taa sna ay keentay in ay qaadacaan doora shada.
Waxa ay sheegeen in R/Wasaare Ku xig eenka dalka Mahdi Guuleed ay ku dacwayn do onaan beesha caalamka si kursigaasi la boob ay wax looga qabto.
SARAAKIISHA SUDAN OO XABSIGA KA SII DAA YEY SIYAASIYIIN RAYID AH
Saraakiisha Xukuma dalka Sudan ayaa xabsiga ka sii daayey siyaasiyiin ra yid ah oo la xir xiray afgam bigii bishii hore ka dib.
xisbiga Sudan Congress, Omar al-Degeir, ayaa Wakaaladda Wararka ee Faransiiska u sheegay in habeenkii Axa dda laga sii day ey meel uu kaligiis ku xirnaa oo uu ku go’ doonsanaa.
Waxaa sidoo kale la sii dayey siyaasiyiin kale, oo ay ku jiraan kuwo ka tirsan xisbiga ugu weyn dalkaas ee Umma. Xubno ka tirsan xukuu maddii ku meel gaarka ahayd ee la kala diray ayaa si xooggan u cambaareeyey he shiiskii Axaddii ee dib xukunka loogu soo celiyey Ra’iisal Wasaare, Abdalla Hamdok, waxayna tallaabadaas ku tilmaameen mid khiyaano ah.
Dadka militariga dhaliilsan ayaa shaki ka qaba in ra’iisal wasaaraha iyo xukuumaddi isa awood loo siin doono in dalka ay si fiican u maamulaan iyo in kale
Shil Dad Carruur U Badan Ay Ku Dhinte en Oo Ka Dhacay Bulgaria Ugu yaraan 46 qof ayaa ku dhintay shil bas oo ka dhacay Bulgaria,sida wararku tebinayaan 12 Caruur ah
ayaa ka mid ah dadka dhintay halka 7 qof oo shilka ku dhaawacmay lagu dabiibayo cisbitaal ku yaal caasimadda.
XOG: DHAAWACYADA 12 ASKARI OO XALAY DIYA ARAD LOOGA SOO QAADAY DHUUSAMAREEB
Sida ay Sheegtay inay ogaatay Caasimada Online 12 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa Xalay laba diyaaradood looga soo qaaday magaalada Dhuusamareeb ee caa simadda Galmudug, kuwaas oo qaba dhaawa cyo kala duwan.
Ciidankaan ayaa Shalay waxaa deegaanka Ce eldheere kula rog maday gaari Cabdibile ah, xilli ay ka soo baxeen Guriceel, kuna sii je edeen Dhuusamareeb.
Laba diyaaradood oo Qaram ada Midoobay ay leedahay ayaa loo diray ciidamadaas, si loogu dabiibo Muqdisho, kuwaas oo Xalay dhaawacyada ka soo qaad ay garoonka Dhuusamareeb.
12-ka askari ee dhaawacyadooda Xalay laga soo qaaday Dhuusam areeb waxay ka tirsan yi hiin qeybta 21-aad ee Milateriga Sooma aliya, saraakiil ka tirsan qeybtaas ayaa noo xaq iijiyey in ciidankaan ay yihiin askartii Jeneraal Mascuud oo ah Taliyaha guutada 15-aad ee qeybta 21-aad.
Sidoo kale saraakiisha aan la hadalnay wa xay sheegeen in dhaa wacyada askartaan ay yihiin kuwo culus, taas oo sababtay in deg deg diyaarad loogu dalbo, si dhaawacyadooda loo gu dabiibo halkii ku haboon.
Shirkadda la talinta Asal Consulting, oo kaashaneysa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaali yeed iyo Ururka Shaqaalaha adduunka, ayaa waxay si rasmi ah u daah fureen Goobaal Online, oo ah adeeg loogu tala galay ganacsiyada ay leeyihiin Haweenka Soomaaliyeed oo doonaya in ay kobciyaan ganacsigooda.
Madashan ayaa la sheegay in ay noqon doonta fursad ay Haweenka ganacsatada ah ay ganacs igo oda muuqaal ahaan loogu xayeysiindoono barta internet-ka ee u jira Gobaal Online, waxayna fikradan ka dhalatey markii la ogaadey in badi ganacsiyada Haweenku leeyihiin aaney ku jirin internet-ka.
Adeegan ayaa wuxuu awood u siinayaa in ay ka helaan fursad ay ku kordhiyaan macaamiisha imaa neysa goobahooda ganacsiga iyo macaaiisha ka eegeysa baraha internetka iyo bogagga baraha bul shada, sida lagu sheegay warbixinta furitaanka adeegg aan.